> Resource > Talooyin > Sida loo Play PowerPoint Madasha on huriyaan dab
Ma iibsaday dab ugu shidin ah iyo doonayay inuu ka ciyaaro PowerPoint (PPT) ku yaal? Waxaan ku leeyahay, marka la barbar dhigo kiniiniyada kale Android, huriyaan dab runtii waa cadaalad ah qiimaha tartan at $ 199. Waxaa ka sii daran waa kiniin ka badan akhristaha eBook ah. Waxaad ka ciyaari kara music, filimada, isticmaalaysa internetka iyo sidoo kale akhri eBooks ku yaal. Ka sokow, waxa kale oo aad diyaarin kartaa bogagga PPT ama soo bandhigga aad. Waxaan ula jeedaa waxaad ka ciyaari kartaa PowerPoint ku yaal. Haa, aad i maqashay. Dhab ahaan waxaad ka ciyaari kara PowerPoint ku huriyaan dab by diinta aad PPT inay huriyaan dab socon videos files.
Sida xaqiiqadu tahay, ma ciyaari karo si toos ah PowerPoint ku huriyaan dab. Si kastaba ha ahaatee, waxaad ka ciyaari kartaa videos on huriyaan dab. Waxay ka dhigan tahay haddii aad loogu badalo aad PPT si file video ah, ka dibna waxaad awoodi doontaa inaad u ciyaaro PowerPoint ku huriyaan dab. Taasi waa waxa aan doono in la hadleynaa ee qodobkan, ku saabsan sida loo badalo PPT ah inay huriyaan dab.
1 Download iyo rakibi PPT2Video Pro
Guji ee Free Download Link soo bixi PPT2Video Pro. Sida ay magaca uu tusinayaa, PPT2Video Pro waa software ah xirfadlayaasha sare ee diinta PowerPoint galay video ah.
2 Launch PowerPoint si ay u huriyaan dab Converter iyo files dejinta
Laba-guji xawaaladaha icon degdeg ah on desktop oo guji Abuur Video Faylal ay ka PowerPoint ee shaashadda soo dhawaynayaa. On interface ee Import , riix Add button inay dajiyaan files PowerPoint in aad rabto in aad si loogu badalo in ay videos. Si aad u bedesho si faylka, guji MoveUp .
3 Dooro qaab wax soo saarka
Dooro MP4 sida qaab wax soo saarka ee ku Settings interface. Laga soo bilaabo halkan, waxaad awoodi doontaa in aad codsato qaar ka mid ah goobaha sare; Aynu niraahno waqtiga kala guurka, goobaha khariidad, music asalka iyo iwm
4 Beddelaan PowerPoint in ay huriyaan dab
In ka dhoofinta interface, dhigay waddo si loo badbaadiyo videos wax soo saarka iyo weeraray Start in la bilaabo geedi socodka ka mid ah diinta aad PowerPoint in file video ah.
Bingo! Taasi waa sida loo ciyaaro slide PPT ama bandhig ku huriyaan dab. Waa mid aad u muhiim ah maalmahan dadka isticmaala si ay u awoodaan inay dib u eegaan PPT ee ay qalabka ay ku qaadi karo, haddii ay taasi ku dab ugu shidin marka aad iska bixi oo ku saabsan tahay. Plus, waxa kaliya dheeraad ah oo waxtar leh iyo aadeen markii mareen PPT ee content ku saabsan qalabka aad ku gashid intii adigoo si ay u fuliyaan laptop ku hareeraysan ama ku dhegi xaq hore ee PC. Beddelaan bogagga PowerPoint ama bandhigyo aad hadda!
Wedding Waxaad ku mahadsan Cards Talooyin - sida loo qoro Wedding ah Waxaad ku mahadsan Card
Photo collage Samaynta Fikradaha iyo Talooyin